XOG: Yaa Amray, Yaase diiday weeraradii shalay ee Magaalada Muqdisho? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. XOG: Yaa Amray, Yaase diiday weeraradii shalay ee Magaalada Muqdisho? * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 26th April 2021
Caasimadda oo baryahan u muuqatay mid aafo foolaneysay ayaa mar qura shalay waxay gashay jawi colaadeed, Weerarkana waxaa Galay ciidamada loo kala yaqaan Duufaan, Haramacad iyo kuwa Gor,gor oo intaba ka amar qaata Taliyaha NISA iyo ku xigeenkiisa kulane.
Dagaalkan waxa Uu noqday mid lasoo jabiyay ciidamad dowladda waxaana Shir Dag dag ah loogu yeeray Taliyaha Dabagalka siyaasiyiinta, Abdullahi Daahir Abbdullahi dhere oo ah Ninka kaliya ee ay ogyihiin inuu wax ka badali karo Qorshaha Dagaal ee socda.
Abdullahi dheere ayaa laga codsaday inuu keeno Naqshado lagu jabiyo Ciidamada Mucaaradka wuxuna abdullahi dhere oo sidoo kale loo yaqaan ugaaska Soomaaliyeed iyo Maxamud dhere u sheegay Farmaajo in dagaal una Fiicnayn xiligan lagu jiro lkn Farmaajo ayaan ku qancin.
Xogta aysaraakiishu bixiyeen waxay intaasi ku dareysaa in abdullahi dheere uu Amar ku bixiyay 1,000 askari oo dhar cad ah oo magalad u joogay hubkoodana haysatay inu Yirahdo madax jabin ku sameya ciidamada mucaaradka, Waana shababta ay u jabeen Ciidamadii mucaaradka u dagaalamayay.
Sarkaalkan magacyada badan, lana arkin ee NISA u qaabilsan dabagalka siyaasiyiinta iyo howlgalada gaarka ah ee Cabdalla ayaa la tilmaamaa inuu si hoose ula macaamilo kooxda Shabaab, kuna howlan yahay xilligan qorshe miinooyin badan Muqdisho looga shaqeeyo si mucaaradka dagaalka lagu jiro dhan walba looga ekeysiiyo.
Tilaabooyinkan uu qaadayo Cabdullahi Dheere ayaa waxaa aad ula dhacay sida la tilmaamayo Fahad Yaasiin oo saaxiib dhawla ah Farmaajo.
Muqdisho oo gashay marxalad adag oo colaadeed, shacabkuna dulman yihiin ayaa xogta amni, waxay sidoo kale tusineysaa in sarkaalkan Cabdullahi Dheere, marna loogu yeero magacyada kale sida Maxamuud Dheere iyo Munasar, dadka qaarna Fileka Madow ula baxeen inuu yahay shaqsiga xukuma qiyaasti toban kun oo dhar cad hubeysan ah, loona yaqaan ilaalada shacabka.
Dad badan waxay maanka ku hayaan aadna isu weydiinayaan sida uu Cabdalla oo la ogyahay inuu CIA-da la shaqeeyo ku aqbalay weerarka mucaaradka oo markuu hore uu diidanaa.